Warbixin Guud Oo Ciidanka Dab-damisku Kasoo Saareen Khasaarihii Ka Dhashay Roobka Ka Da'ay Hargeysa - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Warbixin Guud Oo Ciidanka Dab-damisku Kasoo Saareen Khasaarihii Ka Dhashay Roobka Ka Da’ay Hargeysa
Hargeysa(ANN)-Ciidanka Dab-demiska Caasimada Hargeysa oo ah ciidanka ugu dedaalka baddan gurmadka dhibaatooyinka ka dhaca Caasimada, ayaa warbixin kasoo saaray roobkii xalay ka da’ay magaalada Hargeysa ee sababay dhimashada saddex qof iyo ku dhowaad labaataneeyo dhaawac ah.
Ciidanka Dab-damiska Magaalada Hargeysa, waxay warbin kooban kaga hadleen khasaaraha habeenimadii ka dhashay roobkaa oo ay si weyn uga hawlgaleen.
Ciidanka Dab-damiska oo ku jira gurmad Hargeysa
warbixinta samata bixinta khasaarihii ka dhashay raxmaadkii Eebe ee shalay iyo xalay ku hooray Caasimada Hargeysa oo faahfaahsan waxay u dhigeen sidan:-
1- Degmada Axmed Dhagax aaga masjid Bootaan waxa laga samata bixiyey 5 caruura oo dugsi waxbarasho laga soo fasaxay.
7- Degmada ibraahin koodbuur xaafada Xero-awr waxa ku dumay laba bakhaar oo ay leedahay shirkad Jameeco weyn.
8- Degmada Gacan-libaax dhismaha EX Tiyaatarka Hargeisa waxa soo daatey sakhaaradaha dhismaha oo guud ahaanba xanibay socodka gaadiidka mudo 5 saacadood ah.
9- Degmada Gacan libaax aaga fooqa Buubaa geed ayaa ku fadhiistay meherad ganacsi waana laga jiiday.
1- In la sameeyo miis iyo guddi si wada jir ah uga hawl gala xaaladaha deg-deg ah si loo mideeyo helitaanka xogta dhiilada iyo hogaaminta gurmadka qeybihiisa kala duwan.
2- Sixitaan lagu sameeyo saxmada gaadiidka xilliga gurmadka, helitaanka shaqaalaha shirkaddaha leydhka, wax ka qabashada biraha boodhadhka, iyada oo uu go,aan hore ka soo saarey Madaxweynihii hore Mudane Axmed Max,ed Max,aud Siilaanyo.
Gabagabadii waxaa Ciidanka Dab-demisku u mahadnaqayaa Duqa Caasimada Hargeisa, Badhasaabka gobolka M/jeex, Cisbitaalka guud ee Hargeisa, Ciidanka Booliska qeybihiisa kala duwan iyo Shirkada Sompower kuwaasoo dhamaantood kala qayb qaatay Ciidanka Dab-demiska gurmadkii shalay ilaa xalay ka dhacay Magaalada Hargeysa.
Madaxa Xafiiska Warbaahinta Ciidanka Dab-demiska JSL
Cabdiwahaab Cismaan Toox
990- Gurmadka Degdega ah ee Dab-demiska